पेरिस फेशन विकमा ऐश्वर्याको डेब्यु, भिडियो सहित - samayapost.com
पेरिस फेशन विकमा ऐश्वर्याको डेब्यु, भिडियो सहित
समयपोष्ट २०७६ असोज १४ गते १२:२०
ऐश्वर्या रायले पेरिस फेशन विकमा डेब्यू गरेकी छिन् ।
ऐश्वर्याले लोरियल पेरिसले डिफाइल शोमा इटालियन डिजाइनर गिएमबटिस्टा वल्लीले डिजाइन गरेको आउटफिटमा र्‍याम्प वाक गरिन् । पर्पल ड्रेसमा ऐश्वर्या निकै सुन्दर देखिएकी थिइन् ।
ऐश्वर्याले इवा लन्गोरिया, केमिला कबेलो, हेलेन मिरेन, गैरी हार्नर, अम्बेर हर्ड, डाउनजेन क्रोएस र लिया क्याबेडेटसँग र्‍याम्प वाक गरिन् । ऐश्वर्याले सुन्दर लिलेक प्रिन्टेड ड्रेस लगाएकी थिइन् । यो हाई नेक ड्रेससँग डिजाइन गरिएको थियो । साथै यसमा एउटा लामो ट्रेल पनि थियो जसले क्लासिक लुक दिइरहेको थियो । उनले ह्वाइट रफल्ड शुज लगाइरहेकी थिइन् ।
#aishwaryarai in #gambatistavalli 👗 / #lorealfashionshow ———————————————————————— 👉FOLLOW – @fashionpage_couture👈 For more fashion inspo ! 😉———————————————————————— #couture #designer #couturegown #readytowear #haute #kleid #lovinghautecouture #dress #eveningdress #fashion #fashionpage_couture #bellahadid #bollywood #runway #parisfashionweek #bollywoodactress #мода#платье #кутюр#model #mode #jurk #lorealparis #collection #robe #aishwaryaraibachchan
A post shared by Your Daily Dose Of Fashion! (@fashionpage_couture) on Sep 30, 2019 at 4:25am PDT
पेरिस फेशन विकको आयोजना ऐतिहासिक संस्थान मोनाई डे पेरिसमा शनिबार आयोजना गरियो । ऐश्वर्या राय पछिल्लो १८ वर्षदेखि लोरियल पेरिस ब्रान्ड एम्बेसडर छ । साथै, उनी हरेक वर्ष कान्स फिल्म फेस्टिबलमा पनि हरेक वर्ष ब्रान्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।ऐजेन्सी